Mitrosina amin’ny trosa… | NewsMada
Par Taratra sur 09/12/2016
Mibitaka sy mirehaka ny mpitondra hoe nahazo volabe amin’ireo mpamatsy mahazatra. Trosan’ny mpampanjana-bola ny marina, fakan-tombony. Takalom-patsa, vidim-pihinanana: ny an’ny tena kely no mahatsembotsemboka.
Nefa tsy tsemboka amin’izay kely an-tanana ny mpitondra, fa mitavandra sy mitady hitavana. Hisitrika inona amin’izany ny vahoaka ifotony ao anaty fahantrana lalina sy maharitra? Ela izay fitrosana mahazatra izay.
Izay afa-kandoa no omen-trosa. Amin’ny fomba ahoana amin’ity fahantrana? Misy aza ny fangatahana fanafoanana trosa. Vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao. Misy takalony any ho any. Inona? Ahiahy tsy mampihavana…
Izay no mahatonga ny fivarotan-tanindrazana, fari-dranomasina itavanan’ny sasany, harem-pirenena gaboraraka… ? Mila mazava. Sao mitrosina amin’ny trosa, mampitondra faisana ny taranaka? Ny vola, lany; ny harena, fongana…
Mba efa niala nenina amin’ny fitadiavam-bola eto an-toerana, ohatra? Na tsy manana politika afa-tsy ny fitrosana any ivelany. Tsy ampy hampandrosoana izay haba sy hetra. Misy antony ao, matoa malaina amin’izany ny olom-pirenena.
Eo hatrany ny tsy fahatokisana mpitondra? Na ny tsy fisian’ny tamberin’andraikitra mazava… Mbola izay koa no mampalaina ny mpitondra hanao trosa ato anatiny mialoha ny fitavandrana sy fitavanana izay avy any ivelany.
Anisan’ny be trosa ireo firenen-dehibe. Tsy ny trosa no inona fa ny fomba fampiasana azy. Mba misy fangaraharana ve hatrimin’izay? Na ny amin’izao Repoblika IV izao ihany aza amin’ny fandehan’ny vola eto an-toerana…
Salobon-komana sy ny mandidy dia homana no be amin’ny trosa ampibabena taranaka. Tsy misy fangaraharana, fifampierana… Ho lafo mbamin’ny taninketsa? Ny trosa mahajiolahy, araka ny ohabolana. Eo hatrany ny fahantrana amin’izay.
Tari-drano an-kilahila, be ny mania: miverina amin’ny tompom-bola, na lasan’ny mpitavana. Raha diso izany, ataovy mangarahara. Atombohy tamin’izay nenti- nanana ny Frankofonia àry, raha sahy. Sarobabay, izay voa aza, tezitra.